हातेमालो अभियानः मिलेर काम गर्ने बानीको बिकाससँगै मुर्तीढुंगाका २५ परिवारलाई फाइदै-फाइदा ! | जनदिशा
हातेमालो अभियानः मिलेर काम गर्ने बानीको बिकाससँगै मुर्तीढुंगाका २५ परिवारलाई फाइदै-फाइदा !
धनकुटा, १३ भदौ । गाउँका युवाहरु सबै रोजगारीका लागि विदेशिएपछि खेतबारीको काममा समस्या उत्पन्न भएको छ । धेरै स्थानमा अर्मपर्म त परै जओस्, ज्यालादारीमा पनि काम गर्ने मान्छे पाइँदैनन् । यस्तै, समस्या आइलागेपछि धनकुटाको मुर्तीढुंगाका किसानले आलोपालो गरेर खेतबारीको काममा जानुपर्ने अनिवार्य नियम बनाएका छन् ।
धनकुटाको महालक्ष्मी ९ आहालेका प्रेमप्रसाद ढकालको बारीमा बन्दाकोपी काटेर ओसार्न जुटेका यी सबै स्थानीय सिंहदेवी कृषक समुहमा आबद्ध छन् । एक्लाएक्लै खेती किसानी गर्न गाह्रो, ज्यालादारीमा खेताला नपाउने भएपछि समुहमा आलोपालो गरेर काम गर्ने नियम बनाइएको हो । एकल उत्पादन, सामुहिक व्यवस्थापनले समुहका २५ परिवारलाई फाइदै फाइदा भएको उनीहरुको भनाई छ ।
यहा कामको प्रकृति र आवश्यकता हेरी हातेमालो गरिन्छ । यसले उनीहरुको ब्यावसायिक जागरमा उर्जा थपेको छ । तीन वर्ष यता नर्सरी बनाउने, विरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, थन्क्याउने र उपज बिक्रीका लागि मोटरबाटोसम्म ओसार्ने काम आलोपालो मै हुँदै आएको छ ।
सहयोग र सामुहिकताको भावना कम हुँदै गइरहेका बेला धनकुटा मुर्तीढुंगामा हुन थालेको यो हातेमालो अभियानले गाउँले सबैलाई सहयोग पुगेको छ । मिलेर काम गर्ने बानीको विकाससगै कृषि कर्मका लागि आवश्यक मद्दत पनि जुटेको छ ।
Previous Previous post: घरले च्यापिएर एकै परिवारका पाँचको मृत्यु, एक घाइते
Next Next post: पप्पुको लापरबाहीले पुल भासिएको ठहर, कमसल सामग्री प्रयोग